Waxqabadka, sharadka Apple si loo horumariyo caafimaadkeena | Wararka IPhone
Waxqabadka, sharadka Apple si loo hagaajiyo caafimaadkeena
Adduunyada casriga ah markasta inbadan ayaan fadhinaa oo dhaqaaq yar, taas oo keenaysa in dad muhiim ah sida Tim Cook uu ku andacoodo taas fadhigu waa sigaar cabista qarniga XNUMXaad. Maamulaha Apple-na wuu ku saxanyahay, maadaama firfircooni la'aantu ay dhibaato ku hayso caafimaadka boqolaal milyan oo qof oo sidaad adigu kursi ku shaqaysato.
Laga soo bilaabo Apple waxay ka sameynayaan a dadaal weyn maxaa yeelay waxaan hagaajineynaa caadooyinkan, labadaba alaabooyinka sida Apple Watch iyo barnaamijka Waxqabadka ee kujira iphone-keena.
2 Diiwaanada iyo wadaagista
Kooxda khubarada ah ee ka socota shirkadda Cupertino ee gacanta ku haysa codsigan waxay si fiican u ogyihiin in mid ka mid ah furayaasha jimicsigu ay tahay inaad leedahay dhiirigelin muhiim ah oo ka dambeysa. Abka waxqabadka, dhiirigelinta waxaa lagu bixiyaa laba siyaabood oo kala duwan: dhinac, xiritaanka wareegyada maalinlaha ah ee tilmaamaya heerka waxqabadka iyo, dhinaca kale, guulaha la furayo.
Wareegyada Iyagu waa kuwo aad u xiiso badan maxaa yeelay waxay noo oggolaadaan inaan si dhakhso leh u cabbirno waxqabadka aan qabannay inta lagu jiro maalinta, waxaana jiri doona maalmo aan na siinno xaalado socod ah oo ka badan inta lagama maarmaanka ah annaga oo aan ka warqabin oo aan xirno wareegga cas, halka kuwa kalena aan waxaa laga yaabaa inaanu ogaan oo aan si dhib yar u dhaqaajinno baararka horumarka, markaa waa inaan ku magdhawnaa adoo jimicsi sameynaya.
Dhinaceeda, guulaha ayaa noo ogolaanaya inaan diirada saarno ujeeddooyinka go'an sida labanlaabidda waxqabadka maalin caadi ah, ama jimicsi dhowr maalmood oo xiriir ah. Intaas waxaa sii dheer, way fududahay in la gaaro oo waqti ka waqti Apple wuxuu dhaqaajiyaa guulaha gaarka ah, isagoo kordhiya xiisaha suurtagalka ah ee taariikhahaas.
Diiwaanada iyo wadaagista
Qaybta kale ee ugu xiisaha badan ee arjiga ayaa ah mida noo ogolaaneysa inaan aragno dhammaan diiwaanada la sameeyay ilaa maanta. App ayaa na soo bandhigaysa soo koobid bishiiba iyadoo ay suurtogal tahay in lagu dalbado miirayaasha waxqabadyada. Sidoo kale waa in la ogaadaa in qaybtaan aan ku arki doonno tababarada barnaamijyada la jaan qaadaya Caafimaadka, sida Strava ama Runkeeper.
Waxaan ugu dambeyntii haysanaa xulashada Share, lagu daray cusbooneysiintii ugu dambeysay ee iOS-ka taasna waxay na siineysaa suurtagalnimada in saaxiibbadeen ay arki karaan diiwaanada aan helno, sidoo kale waxaan arki karnaa tooda. Waa hab xiiso leh oo lagu dhiirrigeliyo naftaada iyo xitaa inaad samayso waxoogaa pike ah, had iyo jeerna leh isboorti ahaan calanka oo la caddeeyo in ujeeddada koowaad ay tahay hagaajinta caafimaadka iyo jir dhiska.
Dabcan barnaamijka waa bilaash waxaana loogu daraa sida caadiga ah macruufka, iyada oo aan la soo iibsan siyaado nooc kasta ha ahaadee.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Waxqabadka, sharadka Apple si loo hagaajiyo caafimaadkeena
Apple iyo cilmi baarista daryeelka caafimaadka: CareKit (I)